Israel inoisa tsika nyowani inotyisa yekuvhara kushanya kwevafambi vakabaiwa |
musha » mbiru » International Yevashanyi Nhau » Israel nhau dzekufamba » Israel inoisa tsika nyowani inotyisa yekuvhara kushanya kune vafambi vakabaiwa majekiseni
Nhau Dzemhepo • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nyaya • Kugamuchira Vaeni Indasitiri Nhau • International Yevashanyi Nhau • Israel nhau dzekufamba • mwe • kuvakazve kufamba • chengetedzo • Tourism Nhau • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Nhau dzeKufamba • Zvakavanzika Zvokufamba • Inotyisa Nhau
Israel inoisa tsika nyowani inotyisa yekuvhara kushanya kune vafambi vakabaiwa majekiseni
Israel yave kubayiwa nhomba zvakakwana. International Tourism yaive yave kuda kutanga muna Chikunguru 1. Kutsva kutsva kune chekuita nenjodzi Delta musiyano wehutachiona hweCOVID kunokonzeresa nyika yechiJuda kudzima zuva rakakurumbira rekuvhura revashanyi vekunze kushanyira Israel.
Ndege kubva kuUS kuenda kuIsrael dzakasungwa dzakasimba muna Chikunguru. Mahotera muTel Aviv neJerusalem kekutanga vane mwero wepamusoro wekubhuka nevashanyi vanotarisirwa kusvika kubva kuUnited States.
Israel yakaita zviziviso zvakakura zvichipemberera kuvhurwa kwenyika yechiJuda yekushanyirwa kwevakabayiwa nhomba. Izvi zvakakonzera kuzivisa kwakafanana nedzimwe nyika.
Nhasi, Israel Media inoshuma kuti vakabaya vachengeti vekunze havasi kuzobvumidzwa kupinda muIsrael pamberi paAugust 1. Kutsva kutsva maererano nezvenjodzi dzakasiyana dzeDelta kunonoka kuvhurwa kwenyika. Izvi zvinogona zvakare kukonzera maitiro mune mamwe matunhu epasi.
Hurumende yeIsrael, VaNaftali Bennett hurumende yasarudza nhasi, Chitatu, apo Israeri yakatarisana nekuwedzera kwenyaya dzekoronavirus kushandura nzira yekuvhurazve mafambiro enyika. Uye zvakare, chisungo chekupfeka masiki mukati memba chinodzoserwa kana avhareji mazuva ese makesi achizopfuura zana kwevhiki.
"Chinangwa chedu panguva ino, chekutanga uye chekutanga, kuchengetedza vagari vemuIsrael kubva kuDelta musiyano urikupenga pasi rose," Bennett akaudza venhau vemuno. “Panguva imwecheteyo, tinoda kudzikisira zvakanyanya kukanganiswa kwehupenyu hwezuva nezuva munyika. Naizvozvo, takasarudza kuita nekukurumidza sezvazvinogona - izvozvi - kuti tisabhadhara mutengo unorema gare gare, nekutora matanho ane chekuita nekukurumidza. Zviri kwatiri. Kana tikaramba tichitevedzera mitemo nekuita zvine mutsigo, tichabudirira pamwe chete. ”
Vashanyi vakabayiwa nhomba pakutanga vaifanirwa kubvumidzwa kupinda munyika kutanga muna Chikunguru 1. Izvi zvakaziviswa muna a chirongwa chekuvaka zvekare.
Mumazuva achangopfuura, nyika yakarohwa nemusiyano weDelta, zvichikonzera kuwedzera kwezvirwere mumaguta akadai seModi'in neBinyamina.
Sarudzo yevakuru veIsrael vanozivikanwa kuisa kuchengetedzeka kwevagari vayo nguva dzose kutanga kunogona kukonzera maitiro kune dzimwe nzvimbo dzekushanya kutenderera pasirese. Inogona kuwedzera zvirambidzo kune vanosvika vashanyi, kunyangwe vachifungidzira kuti kubaiwa jekiseni ndiyo yegoridhe kiyi yekufambisa neyekushanya indasitiri.
Pari zvino pane makumi mashanu nemakumi mashanu nemakumi mashanu emakesi anoshanda munyika. Iyo nhamba yakanga ichangobva kuderera kusvika isingasviki 554. Pachinyorwa chayo chando chadarika, huwandu hwakamira kupfuura 200.
Kutevera kuputika kwazvino uye kurudziro nyowani nezviremera yekudzivirira vana vese vane makore gumi nemaviri kusvika gumi nemashanu, pamusoro pe12 pfuti dzakapihwa neChipiri, yepamusoro-soro mukati memwedzi. Mamwe mazana mana ezvo aive ekutanga madosi kuvana, anenge akapetwa kaviri huwandu hwemazuva apfuura.
Kugadzirisa kuputika kutsva uku, hurumende yakafunga kutanga kabhineti yekoronavirus inosanganisira Bennett, Gurukota rezvehutano, Nitzan Horowitz, Gurukota rezvekunze, Yair Lapid, Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, Benny Gantz, Gurukota rezveMari Avigdor Liberman, Gurukota rezvemitemo, VaGideon Sa'ar, uye Gurukota rezveMukati, Ayelet Shaked , pamwe nevamwe vashumiri.
Pakutanga kwezuva, iyo Hutano Ministry yakazivisa kuti mune mamwe mamiriro, vakabaiwa kana kupora vanhu vanogona kurairwa kuti vapinde vari vega.
Zvinoenderana nemirau yazvino, vanhu vanoonekwa sevachengetedzwa zvakakwana (vhiki mushure mekupfurwa kwavo kwechipiri kana mushure mekunge vapora kubva muchirwere) vanoregererwa kubva pakuzviparadzanisa kana vakasangana neanotakura hutachiona.
Nekudaro, sekureva kwenyaya nyowani yakasainwa nemubati mukuru-mukuru webazi, Chezy Levy, director-general, chiremba wedunhu, kana mukuru wePublic Health Services vanozokwanisa kurayira kuti vanhu ava vazviparadzanise vega kana vachinge vaonana nemunhu ane hutachiona. nemusiyano wehutachiona hunofungidzirwa kuti hunotyisa kana nechinoitika chine hutachiona hwakakomba zvakanyanya. Ivo vanogona zvakare kuda kuzviparadzanisa kana vachigara vachisangana nevanhu vane njodzi huru kana vasina kubayiwa, kana kana vakabhururuka nendege imwechete neyakaonekwa coronavirus inotakura. Pamusoro pezvo, iwo murairo mutsva unodzosera chisungo chekupfeka chifukidzo pa nhandare uye munzvimbo dzekurapa.
Gurukota rakavimbisawo kuti nyaya dzekuyedza panhandare yeBen-Gurion Airport - iyo nemusi weChishanu yakaita kuti vamwe vanhu vanosvika zviuru mazana maviri nemazana masere vaienda kumba vasina kuongororwa, sezviri kudikanwa kune vese vanogara muIsrael - zvagadziriswa, uye kuti kumanikidzwa yemitemo yekufamba iri munzira yekukwiridzirwa.
VaIsrael vanobhururuka vachienda kunyika dzakarambidzwa kufamba - parizvino Argentina, Brazil, India, Russia, neSouth Africa - vasina kuwana mvumo kukomiti yakasarudzika yehurumende yakazvipira kuita izvi, zvino vachabhadhariswa faindi.
Zvimwe zvinogadziridzwa pa https://israel.travel/